Herinandro lasa izay, tovovavy iray, tany Sao Paulo Brezila, no nitory an`i Neymar Jr  ary efa mipetraka eo ampelatanan’ny manam-pahefana izany. Mandà izanykosa ity mpilalao baolina kitra ity, fa diso tanteraka ny voalazan’ilay tovovavy fa te-hamandrika ny tenany fotsiny ihany. Mbola namafisiny ihany izany omaly hariva tao amin’ny kaonty ‘Instagram’ tamin’ny alalan’ny horonan-tsary naharitra 7 minitra ,izay nilazany hoe : “Voapanga ho nanao fanolanana aho, amiko midika ho faniratsirana tanteraka izany, fa efa izay moa no zava-misy. Nahagaga ahy izany saingy tena mahatsiravina sy zavatra mampalahelo tokoa izany satria ireo mahafantatra ahy dia mahafantatra ny toetrako tsara fa tsy hahavita zavatra toy izany mihitsy ny tenako.”Nisy ihany koa fanambarana omaly fa nividy ny tapakilam-piaramanidina sy nanofa trano fandraisam-bahiny hoan’ity vehivavy ity ihany fotsiny no nataon’i Neymar fa tsy nahavita nanolana velively ilay tovovavy. Hoan’i Neymar hatrany, noraisiny ho hanatra ho amin’ny sisa izao tranga nahazo azy izao.